I-SOBA3 entle enebhedi elala abantu ababini ejonge egadini - I-Airbnb
I-SOBA3 entle enebhedi elala abantu ababini ejonge egadini
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguAlenka
Indawo entle eluhlaza ekudibaneni komlambo kunye namadlelo. Igadi entle enendlu yeenyosi iqinisekisa ukurhoxa ngokupheleleyo kunye nokuphumla. Kuluyolo lokwenene ukuvuka unombono weenduli okanye ukubukela umlambo.
Ilungele abakhweli beebhayisikile, abalobi, abakhweli, abafundi beencwadi kunye nabasebenzisi bedekhikhi abangakhathaliyo.
Abathandi beAdrenaline banokuzama izandla zabo ekunyukeni, kwiparagliding, kwimidlalo yasemanzini, kwipaki yeadrenaline, kwi-ziplining nokunye okuninzi.
Thatha ikhefu kwaye uphumle kule ndawo yoxolo.
Igumbi libekwe kumgangatho wokuqala wekhaya. Inebhedi elala abantu ababini (enebhedi enkulu) nendawo entle yokubuka igadi. Ikhitshi elincinci elisetyenziswa nangabanye abantu yifriji enkulu (enefriji), i-microwave, isitovu sombane nazo zonke izinto eziyimfuneko ukuze wenze isidlo sakusasa. Ukongeza kwigumbi lokutyela, kukho ii-balcony ezimbini ezijonge empuma okanye entshona, kunye negadi entle ecaleni komlambo iSava Bohinjka. Kukho iindawo zokuhlala, iiTV nesinki ukongeza kwigumbi lokuhlambela elisetyenziswa nangabanye abantu kunye nebhafu eyohlukileyo.
I-Apartment kunye namagumbi e-Pr'Objan ahlala e-Bohinj, kwidolophana yaseSavica. Umlambo iSava Bohinjka uhamba ecaleni kwendawo, kwindawo ekufutshane kukho indlela yokuhamba ngebhayisikile / yokuhamba ekhokelela echibini okanye eBohinjska Bistrica. Indawo ilungele abakhweli, abakhweli beebhayisikile, abalobi kunye nabo bonke abathanda indalo.
Umbuki zindwendwe ngu- Alenka
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bohinjska Bistrica